Burmese taste - Iora: ဒန့် သလွန်သီး နဲ့ ငါးဟင်း၊ မျှစ်ကြော်၊ ငရုတ်သီးဆားထောင်း
ဒန့် သလွန်သီး နဲ့ ငါးဟင်း၊ မျှစ်ကြော်၊ ငရုတ်သီးဆားထောင်း
ခရမ်းချဉ်သီးများများနဲ့ အနှစ်များဆီသတ်ပြီး ငါးများထဲ့အပြီး
ဒန့် သလွန်သီးများသိပ်မပျော့စေချင်လို့ ငါးကျက်ခါနီးမှ ထဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ရေဆူထဲ့ မန်ကျည်းရည်ထဲ့ ပွက်ပွက်ဆူအောင်ပြန်တည်
ငါးဟင်းချခါနီးတော့ ရုံးပတေသီး လေးထဲ့ ၊ နံနံပင်အုပ်။ မျှစ်ကုို ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ ကြော် ငရုတ်သီးဆားထောင်းလေးနဲ့ တွဲဖက်စား
ဟင်းလေးတွေ မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေလို့ မတင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေ တုန်းကချက်စားဖြစ်ခဲ့တာတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Posted by Iora at 12:58 AM
Labels: Fish, spicy paste, Veggie
Anonymous August 24, 2011 at 1:52 AM
Thanks for your drumstick fish curry and fried bamboshoot.It looks delicious as usual.I'll try when my stomach_ache is over.
ဘေဘီ August 24, 2011 at 2:10 AM
ဒန့်တလွန်သီး မစားရတာကြာလှပေါ့း(
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မြသီတာက ဘူဒူလဲဟင်?
Mon Petit Avatar August 24, 2011 at 2:36 AM
I want to try those dish now, but have to waitafew days as I have stomachache too.
rose August 24, 2011 at 3:24 AM
ဒန့်သလွန်သီး မစားရတာ အကြာကြီးရှိပြီ။ အစ်မအိုင်အိုရာ ချက်ထားတဲ့ ဒန့်သလွန်သီး ငါးဟင်းလေး စားချင်လိုက်တာ။ Blog Day ပို့စ်လေးမှာ အစ်မကို တက်ဂ်ထားတယ်နော်။ အဆင်ပြေမယ်ဆို ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
Vista August 24, 2011 at 3:32 AM
အလွန်ကြိုက် .. ရှလွတ်
Nyi Linn Thit August 24, 2011 at 3:32 AM
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ငါးဟင်းရည် ဆမ်းပြီး၊ မျှစ်ကြော်ရယ် ငရုတ်သီးထောင်းရယ် နဲ့ပဲ စားဖြစ်မှာ သေချာတယ်..။း)
Iora August 24, 2011 at 9:20 AM
Thanks for visiting. I am sorry to hear that you have got stomachache like me. I see now I have more friends suffering stomachache like me; you, MPA, and Baby. Please don't eat bamboo shoot when you have stomachache and it makes me more painful if I have got stomachache.
ကုိုယ်လည်း ၂ခါဘဲစားဘူးတယ် ဒီမှာ။ အဲဒီနေ့ က၀ယ်နေကျ အေးရှန်း ဆိုင်မှာ မမျှော်လင့် ဘဲပုန်းလိုက်ချထားတာတွေ့ တာနဲ့ ဝယ်လာတာ။ နုတာမနဲ ရွေးရတယ်ကွယ်။ ဒန့် သလွန်သီး က စားရတဲ့အရသာထက် သူ့ ရဲ့ အနံ့ က အရသာပိုရှိသလိုဘဲနော်။
မြသီတာ ...ဘယ်သူလည်း ကိုယ်လည်း မသိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်နံမည်လား၊ ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်း ပြောတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ လား၊ တခုခုဘဲ။ ကုိုယ်တုို့ အိမ်မှာ တခုခု ကို မျှော်နေကြရင် အဲဒီလို နောက်ပြီးပြောလေ့ရှိကြတယ်။ ဆောရီး..ဆောရီး..
ကုိုယ့်လိုပါဘဲလား။ ကုိုယ်တော့ ဘေဘီ့ကို ညွှန်းတဲ့ မဟာဖြေဆေးကို အိတ်ထဲဆောင်နေရတယ်။
စားချင်ရင် စားပါလို့ ပုံနဲ့ ကျွေးရတာတော့ အားနာပါတယ်။း)
အချိန်ကြိုးစားပြီးယူကြည့်ပါ့မယ်နော်။ တက်ဂ်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မရေးနုိုင်ခဲ့ရင်တော့ စိတ်မကွက်ပါနဲ့ နော်။ အလေးမထားလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်လေးတွေ ဒီလပုိုင်းတွေမှာ ရှိနေလို့ ပါနော်။
ငါး နဲ့ အသီးတွေ မကြိုက်ဘူးလား။ ဒါဆုို လက်ဖက်သုပ်ပေးရမလား၊
Aunty Oo August 24, 2011 at 9:35 AM
Iora August 24, 2011 at 9:44 AM
ဒီမှာတော့ Cat fish လို့ ဘဲရေးထားပါတယ်။ အုိုင်အုိုရာ လည်းသူ့ ကုို ငါးပတ် နဲ့ တူလို့ ဝယ်ဝယ်စားပါတယ်။ တချို့ ကတော့ ကက်ဖစ်ရှ် ဆုိုတော့ ငါးခူ လုို့ လည်း ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါးခူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေခွံ က ငါးပတ်နဲ့ ပုိုတူပါတယ်။ တချို့ ကလည်း ငါးတန် လို့ ပြောပါတယ်။ ငါးတန် လောက်တော့ အရေခွံ မထူဘူး၊ မမဲဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ ငါးပတ်အမှတ် နဲ့ ဘဲ စားဖြစ်ပါတယ်။ လာတာနောက်ကျပေမဲ့ အုိုးလိုက်ကြီးရှိပါသေးတယ်။း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 24, 2011 at 1:25 PM
စာရေးပြီး ညနက်သန်းကောင်မှာ ဘလောဂ့်လိုက်ဖတ်တာ
ဟင်းကောင်းနဲ့ တိုးတော့ ကိုယ့်ဗိုက်ဘယ်လောက်ဆာနေမှန်းသိတော့တယ်
ကိုယ့်ဖာကိုယ်ချက်ရင် စားကောင်းတယ်လို့မထင်ဘဲ သူများဟင်းတွေကြည့်မိတိုင်း စားချင်စိတ်တဖွားဖွားဖြစ်ရတယ်
Iora August 24, 2011 at 5:00 PM
အတူတူဘဲချောရေ..သူများချက်ထားတာတွေ့ ရင် ကိုယ်လည်း ဗိုက်ဆာလာပြီး ဟုိုဟာစားချင်သလို ဒီဟာစားချင်သလိုဖြစ်လာရောသိလား။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ သူများဟင်းတုိုင်းတော့မစားတတ်ဘူး ဂျီးများတယ်။ ဘလော့ဂ်ကသူများတွေ တင်ထားတဲ့ ဟင်းတိုင်းကျတော့ စားချင်နေတယ်။ မဆန်းလား။ဘလော့ဂ်တွေမှာ သူများတွေတင်တဲ့ဟင်းတိုင်း စားချင်စရာ။ ကြည့်တာနဲ့ ဗိုက်ကဆာဆာလာရော။
Phyo Evergreen August 25, 2011 at 10:00 PM
ငါးမကြိုက်ပေမယ့် ငါးဟင်းအနှစ်တော့ကြိုက်တယ်..ထမင်းလေးနဲ့လူးစားရရင်ရှယ်ဘဲ..။ ခုဘဲထမင်းစားပြီးတာ ဗိုက်ဆာလာပြီ..။
Anonymous August 26, 2011 at 12:44 AM
ဟင်းပုံတွေ တင်ရင် ငါးတို့ ဝက်သားတို့ တင်ရင် အမြဲတွေးမိတယ် မကြိုက်တဲ့မစားတဲ့သူတွေတော့ စိတ်ပျက်မှာဘဲလို့ ။
တော်သေးတာပေါ့ ဗုိုက်ဆာသွားတယ်ဆုိုတော့ စိတ်မပျက်သွားဘူးပေါ့။း)
တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ August 26, 2011 at 5:07 PM
ငါးဟင်းကတော့ သွားရည်ကို ကျမတတ်ကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်..
ဟင်းချက်ကောင်းသူများကို အရမ်းလေးစား အားကျမိပါတယ်။ မလေးတော့ ဒီ စနေတနင်္ဂနွေ ချက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
ကောင်းမွန်ဝင်း August 27, 2011 at 3:45 AM
ဒန့်ဒလွန်သီးငါးဟင်းက ဟင်းနယ်တဲ့ ပုံကနေစပြီး ထိတာ။
ဒီတခါ မြန်မာဆိုင်တွေမှာ မေးမြန်းရှာဖွေရမယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်တိုင်း အိုင်အိုရာ့ လက်ရာ ပိုစားချင်လာတယ်။
အပြုံးပန်း August 27, 2011 at 5:22 AM
Iora August 27, 2011 at 9:45 PM
ဟင်းချက်ကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိပါဘူး။ စိတ်မပါတဲ့အခါတွေဆိုရင်တော့ ချဉ်ရင်ချဉ် ငံရင်ငံ မကြေစေချင်တာကြေ ကြေစေချင်တာမကြေ....နဲ့ ပါဘဲ။း)
အမေနဲ့ အမတွေ အကိုတွေ ကအရမ်းဟင်းချက်ကောင်းကြတော့ အရသာတော့ ကောင်းကောင်းခံတတ်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ယောင်လို့ များတော့ အုိုင်အိုရာ ကုို အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ နော်။း)
ကိုယ်လည်း အဲဒါနဲ့ မှ ၂ခါဘဲစားဘူးတယ် ဒီမှာလေ။
ဓါတ်ပုံ ရဲ့ လှဲ့ စားမှုကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။ တကယ်စားရရင် တော်ပြီ နောက်မစားတော့ပါဘူးလို့ နေမှာ။ ကုိုယ်ကအတင်းကျွေးမှာ။ ပြေးလို့ မရဘူး။း)
ဘူးနဲ့ လာတဲ့မျှစ်တော့ဒီမှာပေါပြီး ကောင်းကောင်းရတော့ အဆင်ပြေတယ်မျှစ်ကြိုက်သူတွေအတွက်။ ဒန့် သလွန်သီးကတော့ မမြင်ဘူးသလောက်ပါဘဲ။
san htun August 28, 2011 at 9:54 AM
စားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာတယ်...မစားရတာကြာပြီ..ဂလု..ဂလု...
Anonymous August 29, 2011 at 12:10 AM
ဟုတ်ပါ့ စန်းထွန်းရေ..ကုိုယ်လည်း မစားရတာ ကြာလှပြီ။
အရွက်တွေတော့ရောင်းပြီး အသီးမရောင်းကြဘူး ဘာလို့ လည်း မသိပါဘူး။